Shina: Tandremo! Mamoaka tsiambaratelom-panjakana ny Google Earth · Global Voices teny Malagasy
Shina: Tandremo! Mamoaka tsiambaratelom-panjakana ny Google Earth
Voadika ny 29 Marsa 2019 4:25 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana May 2010)
Ny 6 May 2010,nampanantsoin'ny Diviziona Fitantanana ny Renivohitra sy ny Fanajariana ny Tany ao Shenzhen ilay bilaogera fanta-daza, William Long fa hoe ahiahiana ho namoaka ny tsiambaratelom-panjakana ny sarin'ny Google Earth manondro ireo toby miaramila ao amin'ny www.moon-bbs.com . Nandritra ny resadresaka, nisy olona nandrakitra an-dahatsary ny dingana iray manontolo. Namafa ilay lahatsoratra ilay bilaogera taorian'ny fihaonana ary namadika ny tranonkala hiala an-tserasera.
Ny 17 May 2010, nasongadin'ny fandaharan'ny CCTV “Topics in Focus” manerana ny firenena anefa ilay raharaha. Nanombantombana ny mpisera anaty aterineto fa eo am-pametrahana ny politika hamerana ny fampiasana ny “Google Earth” ny governemanta. Nanombana avy amin'ny zavatra hitany teo aloha i Jason Ng avy any Kenengba fa hihatra ilay politika ao anatin'ny 10 andro.
Tao amin'ny fandaharan'ny CCTV, ankoatra ny toby miaramila dia heverina ho tsiambaratelom-panjakana ny foiben'ny herinaratra, ny toerana fanangonana rano, ny toeram-pamokarana herinaratra, ny fitaovana fifandraisana ary ireo fitaovana hafa mifandraika amin'ny tombontsoa ara-toekarena sy ny tombontsoa ara-tsosialy ary tsy tokony aseho amin'ny alàlan'ny sarintany amin'ny zanabolana an-tserasera.
Araka ny lalàna efa misy, mampigadra 3 ka hatramin'ny 7 taona an-tranomaizina ny fivoahan'ny tsiambaratelom-panjakana, na niniana na tsy niniana natao . Mety hahatratra 5 ka hatramin'ny 10 taona ny sazy ho an'ny raharaha goavana.